Ungayifaka njani i-Influencer, iBlogger, okanye iNtatheli | Martech Zone
Ungayifaka njani i-Influencer, iBlogger, okanye iNtatheli
NgoLwesine, Agasti 13, 2020 Lwesine, ngoFebruwari 25, 2021 Douglas Karr
Kwixesha elidlulileyo, ndibhale malunga UNGAYENZI njani ibhlogi. I-saga iyaqhubeka njengoko ndifumana umsinga ongapheliyo wobuchwephesha boluntu olungenalo ulwazi endiludingayo ukukhuthaza iimveliso okanye iinkonzo zabaxumi bazo.
Kuthathe ixesha ukufumana i-pitch efanelekileyo yokubonisa. Ndifumene i-imeyile evela kumcebisi weendaba zentlalo kunye Isupercool yoyilo. I-Supercool yiarhente yokuyila egxile kwimveliso yevidiyo ekwi-intanethi kunye nemveliso, intengiso yentsholongwane, imbewu yevidiyo, imikhankaso yemithombo yeendaba zentlalo, iividiyo zentsholongwane, ukonwatyiswa okunophawu kunye newebhu. Le imeyile engakholelekiyo!
Iimpawu zeBlog enkulu
Ibala lalikhona ezenziwe. Ngokwesiqhelo ndifumana ingubo esikiweyo kwaye ndiyincamathisele. Ndicima ezo ndawo ngokukhawuleza. Ukuba awukwazi ukufunda ukuba ndingubani, kutheni ndimamele?
Ibala ngokufutshane undixelela ulwazi. Uninzi lwabantu lwe-PR lusika ngokulula kwaye luncamathisele ukukhutshwa kweendaba ngokuhlekisayo kumzimba we-imeyile.
Ibala libonelela ngam Catshulwa ukungena ngqo kwiposti yam yebhlog!
Ibala libandakanya ikhonkco kwibali lokwenyani (kwaye apho ndinokubhekisa khona kwaye ndikhombe iindwendwe zam).
Ibala liyandixelela iindlela ezahlukeneyo Ndingayisebenzisa le ngcaciso! Kulapho ndathi gwantyi iinyembezi… ndinyeka. Khawufane ucinge ukuba… ukundongela ixesha, uDarci wayesele ecinga ngendlela endinokwenza ngayo kulwazi ... kwaye wongeza inqaku lokunxibelelana naye ukuba ndinemibuzo.
Inqaku libonelela yangasemva kwingcali kwaye kutheni kubalulekile ukuba umamele.
Ibala liyavalwa ngoDarci igama lokwenyani, isihloko kunye nenkampani (endithi mna wajonga phezulu!)
Isandi sinefayile ye- Phuma kuyo! PR abantu bahlala bethumela ukusika kunye nokuncamathisela ii-imeyile ngaphandle kwe-Outlook- ngqo ukwaphula isenzo se-CAN-SPAM.
Le yi-imeyile esondeleyo egqibeleleyo… ndingayilinganisela ngeB + eqinileyo. Olona lwazi luncinci lungekhoyo kukutsiba andicingi ukuba baninzi abantu be-PR abanokukhathalela ukuthatha-kodwa bekuya kuba kuhle ukuva ukuba kutheni kufanelekile kubaphulaphuli bam. Amagama ambalwa alula kwi-imeyile anje
Ndiqaphele Martech Zone Uthethile ngevidiyo nakwimithombo yeendaba zentlalo kwixa elidlulileyo, ndiye ndacinga ukuba oku kunganomdla kuwe…
tags: Inqaku leBloggerindlela yokufaka inowuthiUyifaka njani ibhlogindlela yokufaka intatheliUngayifaka njani impembeleloInqaku lentatheliukumaintsholongwanesupercool yoyilouyokwakha
Izixhobo zeRaven: Iplatifomu yeSixhobo se-In-One se-SEO yee-Arhente, ii-Freelancers, kunye neeNtengiso zeNdlu
Jun 16, 2011 ngo-7:44 AM
Enkosi ngokwabelana ngoku - umdla ngokwenene. Njengomntu ohleli kucingo lwe-PR, kwaye njengeblogi ngokwam (nangona ingabalulekanga ngokwaneleyo ukuba ifakwe!), Kuluncedo kakhulu ukubona uhlobo lweepitsi ezisebenzayo. Ithuba elihle lokufunda, ngoko enkosi!
Inye into endimangazayo ngayo nangona inqaku lesi-5. Ndiqhuba iqela elincinci kodwa elisebenzayo le-PR/iNtengiso njengomsebenzi wam wosuku, kwaye ngamanye amaxesha ndifumana olu hlobo lwesandi (kwaye kunqabile, ndibenze nabo).
Kwiindawo endizenzileyo, andizange ndilufake uhlobo lolwazi oluqulathwe kwinqaku lesi-5, kuba ndicinga ukuba abantu endibaxhobileyo banokuzicingela ngokwabo ezi zinto-kwaye andifuni ukubaxelela ukuba njani. ukwenza imisebenzi yabo (ngokulinganayo ndiyacaphuka xa abantu besenza loo nto kum).
Nangona kunjalo, isithuba sakho sindenza ndicinge kwakhona ngeso sikhundla!
Ndivuma ngokupheleleyo malunga nokwenza buqu nangona kunjalo - kubaluleke kakhulu ngakumbi ukuqwalasela ubume obudityanisiweyo bomsebenzi 'wangoku' wonxibelelwano.
Ngoko, enkosi kwakhona!
Juni 16, 2011 ngo-12: 41 PM
Ndithatha umbono ophikisayo apha. Yintoni kwi-heck ividiyo yezopolitiko kunye nentengiso yezopolitiko yezentlalo inento yokwenza nawe okanye ibhlog yeTekhnoloji yeNtengiso? #1 ayo "personalized" uqinisekile ukuba inegama lakho kuyo kodwa ngubani ongenakufikelela kuloo kwaye ube nayo yokungenisa ngokuzenzekelayo kwi-imeyile (ndicinga ukuba umqeshi wakho wangaphambili ulungile kuloo nto) #5 Ndivumelana nomnxibelelwano ngokupheleleyo malunga nokungabeki Olu lwazi lungaphakathi, kuya kufuneka uyazi eyona ndlela ilungileyo yokusebenzisa ulwazi kubaphulaphuli bakho kodwa ikhonkco kwi-tweet luluvo oluhle. Ngokusisiseko ngenxa yokuba uninzi lwezinye iindawo ze-PR ziyafunxa azikwenzi oku kulunge, kuyenza ingabinancanci ngakumbi kunezinye. Le pitch iya kwenziwa ngcono ukuya kumntu okwindawo yezopolitiko ngokoluvo lwam.
Njengaye nabani na ozithengisayo njengentsholongwane nantoni na elahlekelwa yintembeko kum (kodwa mhlawumbi ufumana ukhangelo kunye namehlo okusebenzisa elo gama)
Juni 17, 2011 ngo-3: 26 PM
Ezopolitiko kunye nokuthengisa zibambene ngesandla, Chris. Ndingatsho ukuba yayiyintengiso eyenza u-Obama eofisini. 'Iphulo' lakhe lethemba kunye notshintsho laqwengwa ngabavoti. Ukusebenzisa kwakhe abalandeli kunye nabaphembeleli kwakumangalisa kakhulu, ngokwenene intshukumo yeengcambu zengca. RE: #1, Ndivumelana nawe. Inqaku lam yayikukuba uDarci uye weza wasijonga ngaphambi kokuba abeke… into eninzi yebhetshi kunye nokuqhushumba kweefemu zePR azenzi.
Oktobha 16, 2014 ngo-7: 22 PM
Doug, ungacebisa njani ukuba umntu enze ikhonkco lokuphuma kwi-imeyile xa ibhalelwe umntu omnye (iblogger okanye intatheli) kwaye ithunyelwe kuloo mntu kwaye ayidityaniswanga kuluhlu kwiqonga lentengiso ye-imeyile?
Uninzi lwabantu abasemthethweni be-PR abathumeli ii-imeyile ezininzi ngoko ke andazi ukuba kuyenzeka njani ukuphuma. Ngokucacileyo, ukuba inkampani ikubhalisele kwii-imeyile zayo zokuthengisa (ngaphandle kokungena kwakho), libali elahlukileyo elo.
Oktobha 16, 2014 ngo-7: 53 PM
Molo Carri! Ngokwenyani uninzi lwabantu abasemthethweni bePR bathumela ii-imeyile ezininzi. Uninzi lwamaqonga ePR akuvumela ukuba ukhethe zonke iintatheli zakho kunye neeblogi kwaye emva koko uthumele. Abanye, njengeMeltwater (umxhasi) baneempawu zokungabhalisi kwiqonga labo kodwa uninzi lwabanye alunalo. Ukuba awunabudlelwane beshishini, ufuna ngokwenene inkqubo eya kuloga ukuphuma. I-Outlook kunye ne-Gmail aziyinqumli. Ndicinga ukuba enye indlela iya kuba kukusebenzisa isixhobo esinje ngeFormstack kwaye abantu bagcwalise ifomu (okanye iFomu kaGoogle kwispredishithi)… kodwa kunzima ukuyilandela.